निर्मलालाई न्याय दिन छाडेर सुन्दरी जिताउन लागे पूर्वएमालेका यी नेताहरू – purnakhabar.com
मङ्सिर ८, काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले न्याय नपाएर बुबाआमा धर्ना बसिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू भने सुन्दरी जिताउने अभियानमा लागेका छन् ।
एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहरूले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन पुगेकी श्रृंखला खतिवडाका लागि सामाजिक सञ्जालहरूबाट धमाधम भोट मागेका छन् । भोट माग्ने सूचीको अग्रस्थानमा नेकपाका स्थायी समितिद्वय शंकर पोखरेल र योगेश भट्टराई छन् ।
पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विरोध खतिवडाकी छोरी श्रृंखला खतिवडाका लागि कम्युनिस्ट नेताहरूले भोट मागेका छन् । सुन्दरी प्रतियोगिता हुनु हुँदैन भन्ने एमालेका नेताहरू अहिले भने धमाधम सुन्दरी जिताउने अभियानमा लागेपछि धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
पोखरेल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत हुन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा श्रंखलाको भिडियो सेयर गरेका छन् ।
श्रृंखला खतिवडालाई जिताउन सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाए जस्तै निर्मला पन्तका दोषीलाई कारबाही गराउन अभियान किन नचलाएको भनेर फेसबुक र ट्वीटरमा एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहरूमाथि प्रश्न पनि उठेका छन् ।
सांसद समेत रहेका भट्टराईले पनि श्रंखला खतिवडाका लागि भोट मागेर सामाजिक सञ्जाल रंगाएका छन् । श्रंखलाका लागि भट्टराईले ट्वीटर र फेसबुकबाट भोग मागिररहेका छन् ।
मिस नेपाल २०१८ की विजेता श्रृंखला खतिवडा चीनमा भैरहेको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको लागि प्रतिस्पर्धामा छिन् । २३ वर्षीया श्रृंखला खतिवडा पूर्वएमालेका नेता बिरोध खतिवडाकै छोरी भएका कारण पोखरेल, भट्टराईसहितका नेताहरूले भोट मागेका हुन् ।
किन भने यसअघि पनि नेपालका प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली युवतीहरू मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा भाग लिन गएका थिए । उनीहरूका लागि एमालेका नेताहरूले कहिल्यै भोट मागेका थिएनन् । किन भने श्रृंखला खतिवडा एमाले हुन् ।
एमाले पृष्ठभूमि भएका अधिकांश नेताहरूले श्रृंखला खतिवडाका लागि धमाधम भोट मागिरहेका छन् ।
भोटिङमा श्रृंखला अगाडि रहेको पूर्वएमालेका नेताहरूले बताएका छन् । मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा १ सय २१ देशका सुन्दरीहरू सहभागी छन् ।
श्रृंखला खतिवडाका बुवा विरोध खतिवडा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा जितेका छन् । तत्कालीन एमालेबाट उनले टिकट पाएका थिए । श्रृंखला खतिवडाकी आमा मुनु सिग्देल खतिवडा पनि तत्कालीन मकवानपुर एमालेको जिल्ला अध्यक्ष भैसकेकी छिन् ।
संबिधानमा के के लेख्यौ ?
तिम्रो मनले कसरी स्विकारयो संसदीय प्रणाली निर्दोष गरिबलाई सहिद बनाइ कुर्सी किन रोज्यौ ? भनेको पूरा गर्न नसक्नेले, ढ्यांग्रो ठोक्यौ समाजमा, छुवाछुत नानाभाती यथावतै अझैसम्म राख्यौ ! हेर्दै जाउ तिम्रो कालखन्ड तराजुमा जोखिदैछ, भन अहिलेसम्म संबिधानमा के के लेख्यौ ? शहिदको रगतमा व्यापार गरेर आज समस्या यथवतै राखी आफ्नो मात्र स्वार्थ देख्यौ ! १७ हजार […]
जनयुद्दका सहकर्मीले हत्कडी लगाएपछि जेलब्रेकर उमा भुजेलको अनुभूति ‘क्रान्ति अन्तिम सत्य हो’
क्रान्तिको बाटो सोझो , सरल र मैदानी भूभागबाट मात्र हिँड्दैन । क्रान्तिको लक्ष्य मात्र सफा र स्पष्ट हुन्छ, बाटो त आवश्यकताबमोजिम परिवर्तित गरिन्छ र परिस्थितिको बाध्यताले गर्दा यदाकदा खण्डित पनि हुन सक्छ । – क. गान्जालो नेपालमा आज दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम छ । यससँग नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध रहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य […]
कात्तिक १४, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन् । आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ । उनीसहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उनकै मन्त्रालयमातहतमा पुगेका छन् । खत्रीसहितको स्वामित्वको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हाल ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेका ४ […]
एक दशकमा दुई तिहाइ कृषक विस्थापित गर्छौं : अर्थमन्त्री
ओली र प्रचण्डलाई २२ नेताको पत्र : पक्षपातको सीमा नाघ्यो